Fikisahan’i Nepal hampiasa fitaovam-pitaterana mandeha amin’ny herinaratra · Global Voices teny Malagasy
Hisy fiarabe vaovao mandeha vatoaratra haparitaka ao Katmandou
Nandika (fr) i Simon Zwierniak
Voadika ny 23 Mey 2022 10:20 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Italiano, English
Iray amin'ireo fiarabe telo, nafaran'ny Sajha Yatayat avy any Shina, misosa eo akaikin'ilay toby famokarana herinaratra ahodin-drano Upper Bhote Kosi, tamin'ny Alakamisy 14 aprily 2022. Fiarabe 37 fanampiny no nafarana. Sary an'i Bhushan Tuladhar tao amin'ny Nepali Times. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Tao amin'ny Nepali Times ity lahatsoratra ity no navoaka voalohany. Dika nasiana fanovàna no naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tsy misy afaka ny ho tena mampiavaka ny tanjon'i Nepal hanatratra ny fanjifàna angovo ‘net-zero’ hatramin'ny 2045 afa-tsy ity zavanisy tamin'ny taombaovao ity, ny Alakamisy 14 Aprly 2022 nandalovan'ireo fiarabe telo fitaterana iraisana, teo anoloan'ny toby famokarana herinaratra sy ny tambajotrana takelaka fandraisana taramasoandro teo amin'ny reniranon'i Bhote Kosi.
Ireo fiarabe telo ireo no voalohany amin'ireo 40 mandeha vatoaratra nafaran'ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny fitaterana anaty kaoperativa Sajha Yatayat avy any Shina. Angovo azo havaozina no mampandeha azy ireo, voakarin'ireo toby famokarana herinaratra ahodin-drano toy ilay tetikasa Upper Bhote Kosi, manana tanjaka 45 MW, manamorona ny làlambe Arniko ao Phulping Katti, ao afovoan'i Nepal, hatrany amin'ny sisintany shinoa.
Andro visy lasa izay, nandingana ny ladoany tao Tatopani ireo fiarabe telo, toerana manana ny lanjany lehibe eo amin'ny sisintany iraisan'ny Shina sy Nepal. Avy eo izy ireo dia hoentina ambony kamiao ftaterana ho any Katmandou, noho izy ireo iva tena manakaiky ny arabe dia sarotra izorana ho an'ireo fiarabe fitateram-bahoaka ireo ny sasany amin'ireo lalambe. Avy eo, rehefa avy mandalo fitsirihana teknika sy fitsapana ao Katmandou renivohitra hijerena ny faharetan'ireo vatoaratra, dia tokony ho tonga atsy aoriana kely amin'ity taona ity ihany koa ireo fiarabe 37 ambiny.
Hita ao anatin'ilay fifanarahana mitentina 3,7 tapitrisa dolara amerikana nifanaovana tamin'ilay orinasa shinoa CHTC koa ny hahazoana famahanana miisa 20 manana tanjaka 90 kW tsirairay, afaka hamahanana vatoaratra ho ana fiarabe roa miaraka mandritra ny ora efatra.
« Ity no ho angovon'ny ampitso ho an'ireo fitaterana aty Nepal » hoy ny nambaran'i Bhusan Tuladhar, mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Sajha Yatayat no sady mpikatroka ho an'ny angovo maitso. « Tsy maintsy idirantsika ny tetezamita mankany amin'ny fitaterana mampiasa ny herinaratra, tsy hoe fotsiny hampihenàna ny entona karbona ataontsika sy ny fanafarantsika solika, fa koa hampihenàna ny fandotoana rivotra aterak'ireo fiara mandeha gazoala. »
Navoitran'i Bhusan Tuladhar ny fomba hiatrehan'ireo fiarabe ireo ny masontsivana 3E ao Népal : energy management, environment management and economic management (fitantanana ny angovo, ny tontolo iainana, ary ny toekarena. « Fifanarahan'ny samy mandresy, raha ho antsika, ireo fiarabe mandeha vatoaratra ireo, » hoy izy manampy. « Na eo aza ny sandany lafo am-boalohany, miaraka amin'ny vidin'ny gazoala iarahana mahita, hidina ny vidin'ny fampandehanantsika azy ka hahatonga azy ho azo ihorirànana mifanaraka amin'ny fotoana. »
Na talohan'ny fiakaran'ny vidin-tsolika amin'izao fotoana izao aza, efa nitsinjara tamin'ny solika sy ny kojakoja fanolo ary ny fikarakarana fiara ny 40% amin'ny sandan'ny fampandehanana ny Sajha Yatayat. Miaraka amin'ny fidangan'ny vidin'ny gazoala, niakatra hatrany amin'ny 50% ireny vidin'ny fampandehaana ireny. Teboka iray miabo ho an'ireo fiara mandeha vatoaratra ny fahamoran'ny sandan'ny fikarakaràna azy.
Fanampin'ireo fiarabe shinoa miisa 40, mifampiraharaha amina orinasa Indiana ihany koa ny Sajha Yatayat hahazoana fiara kelikely kokoa miisa efatra afaka hikorisa ao Patan, miaraka amin'ireo fiara maromaro mbola ho avy aoriana.
Fiarabe iray an'ny Sundar Yatayat. Sary an'ny Nepali Times. Nahazoana alàlana.
Aoriana ao, ny Sajha Yatayat dia mihevitra ny hanampy fiarabe 12 mandeha vatoaratra ho ampiasaina amin'ireo zotra mampifandray faritra amina elanelana lavitra. Tsy ela akory izay, ilay orinasa tsy miankina Sundar Yatayat (etsy amin'ny sary) dia nividy ihany koa fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny vatoaratra mikorisa ao amin'ny làlany ao Ring Road. Fanampin'izay, ny Guna Airlines dia mampiasa andiana fiara mandeha vatoaratra ho mpamindra olona ao anatin'ny seranampiaramanidina ao Katmandou.
Nandritra ny taon-ketra farany teo, nanafatra fiara niiisa 2.000 mandeha vatoaratra i Nepal, ka 800 tamin'ireo no nandalo ny sisintany avy any Shina nankao amin'ny distrikan'i Rasuwa. Ny tetezamita mankany amin'ireo fiara mandeha vatoaratra eny anivon'ny tsy mainkina dia fiantraika mivantan'ny pôlitikam-panjakàna mikendry ny hampihena ny fanjifàna ireo solika azo tamin-javatra lo. Kanefa, mbola avo be hatrany ny vidin'ireo fiarabe mandeha vaotaratra noho ny hetra ambony be sy ny tombony alain'ireo mpaninjara mifanaraka amin'izany.
Mandra-pahatongan'ny 2025, fikasan'i Nepal ny hamadika handeha amin'ny herinaratra ny 25% amin'ireo fiara fitaterana manokana sy 20% amin'ireo fitateram-bahoaka. Kanefa, raha mbola misitraka tataon-ketra ambany foana ireo SUV, ary hahazo tohana ara-bola ireo fiarabe mampiasa gazoala, ny fiara mandeha vatoaratra misanda kosa lafobe, efa ho avo dimy heny lafo lavitra noho ireo fadin-tseranana sy ny hetra maro hafa.
Tarehimarika avy amin'ny Népali Times.
Tamin'ny taona lasa, nitombo 700 MW ny fahafaha-mamokatra nananan'ireo toby famokarana herinaratra ahodin-drano ao Nepal, nampiakatra ho 2.150 MW rehefa atambatra. Na izany aza, miankina amin'ny fisan'ny rano mikoriana ny ankamaroany, midika izany fa midina ny vokatra rehefa tonga ny fotoana maintany ary misy ambim-bava rehefa fotoanan'ny orana. Amin'izao fotoana izao, mba hanentsenana ny tsy fahampiana, manafatra 400MW avy any India i Nepal, saingy afaka koa manondrana rehefa fotoanan'ny orana.
Nandritra ilay kaonferansa faha-26 momba ny toetrandro (COP26) tany Glasgow tamin'ny 2021, nohamafisin'ny praiminisitra, Sher Bahadur Deuba, fa efa an-dàlana mankany amin'ny « tsy fisiana entona karbôna » i Nepal amin'ny 2022 ary mety hiiiba izany mandra-pahatongan'ny 2030 aorian'ny nampidinany ny fanjifana ireo angovo avy amin-javatra lo sy nampitomboany 45% ny haben'ny ala ao aminy.
Nandritra ny taon-ketra farany teo, nandany 217 lavitrisa ropia nepaley ny firenena (1,66 lavitrisa euros) tamin'ny fanafarana solika, ary 180 lavitrisa (1,38 lavitrisa euros) fotsiny nandritra ireo volana enina farany. Miaraka amin'ny fisondrotam-bidin'ny solitany tsy voadio erantany, mbola ho ambony be io sandany io ho an'ny taon-ketra diavina ankehitriny. Ireo vokatra avy amin'ny solitany no manome ny 13% amin'ny fanafarana ataon'i Nepal.
Nandritra ireo volana enina farany dia efa in-4 nisondrotra ny vidin'ny lasantsy sy gazoala. 160 NPR (1,24 euros) ankehitriny ny 1 litatra amin'ny lasantsy – efa ho avo roa heny raha milahatra amin'ny taona lasa. Vinavinan'ny fanjakana ny hametraka hoe andro dimy isan-kerinandro no natao hiasàna, afaka hampidina 20% araka izany ny fanjifana solika.
Nanambara ny orinasam-panjakana Nepal Oil Corporation (NOC) fa very 16 NPR (0,12 euros) isaky ny lasantsy 1 liatra ary 12 NPR (0,093 euros) isaky ny gazoala 1 liatra lafo, rehefa atambatra dia 5 lavitrisa ropia nepaley (39 tapitrisa euros) isambolana, midika fa hisy ny fisondrotan'ny vidiny ato ho ato. Nambaran'ny NOC fa efa tsy misy ny vola handoavana ireo fanafarana solika hatao any India aoriana ao.
Na eo aza io sary maharevo ahitana ireo fiarabe mandeha vatoaratra avy any Shina ho any Katmandou io, mizotra amin'ny lalàna manoloana ny toby famokarana herinaratra ahodin-drano sy masoandro, ireo faharatsian'ireo lalambe Arniko koa dia tondro iray milaza ny endrika mampiteny ny moana ananan'ireo fotodrafitrasan'ny tambajotran-dàlana ao Nepal. Tsy ho vitan'ireo fiarabe ireo ny hananika ireo làlana mikintaontaona ary tsy maintsy entina ambonin'ireo kamiao raha ho alefa ao Katmandou.
Taorian'ilay horohorontany tamin'ny 2015, mbola mikatona noho ny fahasimbàna ny lalambe, ary koa ireo toeram-piampitàna ao Kodori eo anelanelan'i Nepal sy Shina. Vita tamin'ny 1996, ilay toby famokarana herinaratra ao Upper Bhote Kosi, tamin'ny 2015, dia nifandimby niharan'ny horohoron-tany sy tondradrano nateraky ny fitsonehan'ny vongan-dranomandry iray. Vao telo taona monja izao no niverina niasa izy taorian'ireo fanamboarana natao.